Amazon dị na Switzerland | ECommerce ozi ọma
Amazon dị na Switzerland
Ọnụ ụzọ Amazon gaa ahịa e-commerce Switzerland na nso nso. Nnukwu e-commerce America ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta nkwado na Akwụkwọ Switzerland, nke pụtara na ụlọ ọrụ nzi ozi ga na-elekọta iwu nke Ndị ahịa Amazon n'ọdịnihu dị nso.
"Anyị na-atụ anya na ngwugwu ndị mbụ ga-eru ebe ha na-aga na Disemba ma ọ bụ Jenụwarị," ka otu onye metụtara kwuru, dị ka Bilanz si kwuo. Fliex Stierli, onye bu isi nke ọrụ nzipu ozi na Switzerland Post, Ekwenyela na ụlọ ọrụ nzi ozi na mkparịta ụka na Amazon. Ọ gbakwụnyere, "mana a ka nwere ọtụtụ isi arụmọrụ nke ga-edo anya," Amazon gosikwara mmasị Switzerland na ahịa e-commerce. Ralph Kleber, onye njikwa nke Amazon.de kwuru "" Anyị anaghị eleghara Switzerland anya. “Ndị ahịa Switzerland dị anyị mkpa nke ukwuu. Amazon achoghi imechu ndi ahia a ihu. "
Ekwuru na usoro omenala ga-ewe karịa awa atọ, nke ga - enyere aka ịnyefe na 24 awa ga - ekwe omume n'ọdịnihu. Amazon na-enye ụdị nnyefe a dịka akụkụ nke onyinye ya na ndị otu Prime ya. Na Amazon PrimeNdị ahịa na Switzerland ga-enwe ike ịnweta nnweta niile dị na Amazon, nke gụnyere nnweta ịzụta ma chọọ ngụkọta nke ngwaahịa 229 site na nnukwu katalọgụ dị n'ịntanetị. Amazon enweela ihe nlereanya a nke onyinye na mba dị iche iche gburugburu European Union dị ka Netherlands, Austria na Turkey nke Amazon ka webatara.
Na-ewebata nke a e-commerce mogul Na mba Europe ndị ọzọ, ị nwere ike ịtụgharị ụlọ ọrụ e-commerce a, nke bidoro dịka ụlọ ọrụ naanị na ntanetị, ka ị bụrụ ụlọ ọrụ buru ibu dịka ahịa anụ ahụ etolitela nke nta nke nta kemgbe afọ. Amazon na-aga n'ihu ịmasị anyị na ọganihu ha, anyị ga-atụ anya ọtụtụ ihe n'aka ha na afọ a 2018.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Amazon dị na Switzerland
E-azụmahịa na Netherlands ga-enwe uru nke ijeri Euro 22 na 2017
Ndị ahịa Frans jiri ego karịa ekeresimesi a